याैन चर्चा – Lok Sangit Parakhi
स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव- यौन सम्पर्क गर्दा मास्क लगाउनू
न्युयोर्क : अमेरिकाको न्युयोर्कमा कोरोना महामारीको अवधिमा यौ-न स’म्पर्क गर्दा मास्क लगाउनुपर्ने भन्दै आफ्नो ‘गाइडलाइन’ अपडेट गरेको छ । न्युयोर्कका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले यसअघि सबैलाई से-क्स पा’र्टनरसँग सुरक्षित रहने बताएका थिए । पछिल्लो समय गाइडलाइन अपडेट गर्दै टाढा रहेका जोडीहरुलाई लामो समयपछि भेट्ने क्रममा मास्क लगाएर मात्रै यौ-न स’म्पर्क गर्न सुझाव दिएका हुन् । गत महिना इंग्ल्याण्डमा रात का’ट्ने गरी बाहिर जानु र अरुसँग यौ’न सम्प’र्क गर्न नपाइने भन्दै कानून यौ-न सम्प’र्कको अवधिमा कोरो’ना भा’इरस सर्नसक्ने भन्दै सचेत गराउन यस्तो सुझाव दिइएको बताइन्छ । ‘अनुहार छोप्ने मास्क लगाउनू, यौ न स’म्पर्कको अवधिमा नाक, मुख छोप्नु वा मास्क लगाउनु उचित हुन्छ । यद्यपि यो तपाईँको व्यक्तिगत कुरा हो,’ गाइडलाइनमा उल्लेख छ । यौ न स’म्पर्कको अवधिमा लामो स्वास फेर्दा वा अंकमाल गर्दा को’रोना भा’इरस सर्नसक्
यौन खेलौनाबाट हुने फाइदा र बेफाइदा के-के हुन् ?
डा. सुमनराज ताम्राकार दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि हामी घरभित्रै बस्न बा-ध्य छौँ । यौन पार्टनर नहुने व्यक्तिले यौनसुखबाट विमु’ख हुनुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ । जबर्जस्ती यौन चाहनालाई दबाउन खोजेको खण्डमा मानसिक स’मस्या निम्तिन बेर लाग्दैन । यस्तो परिस्थितिमा यौन खेलौना राम्रो विकल्प हुन सक्छ । विवाहपूर्व यौनसम्बन्ध अस्वीकार्य हुने हाम्रो जस्तो समाजमा यौन खेलौनाको उपयोग गतिलो विकल्प हुन सक्छ । त्यसैले पनि नेपालका शहरी क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि यौन खे’लौनाको बिक्रीवितरण बढ्दो छ । यौन खेलौना एक जनाले मात्र प्रयोग गर्ने गरेको खण्डमा कुनै पनि यौ न रो ग सर्दैन । गर्भधारणको चिन्तै हुँदैन । देशमा अहिले यौ-न अ-पराधका घ-टना बढिरहेका छन् । पोर्नोग्रा-फी वा यस्तै अन्य कुनै कारण विकसित आफ्नो क्षणिक यौ-न उत्ते-जनालाई म त्थर पार्न यौन खेलौ-नाले सघाउने हुनाले यौ-न अ-पराधमा कमी ल्याउन मद्दत गर्छ । कतिपय
यस कारण यौन सम्पर्क गर्दा महिलाहरू आवाज निकाल्छन् ?
महिलाहरु सम्भोगका बेला विशेष खालको आवाज निकाल्छन् । किन निकाल्छन् त आवाज रु यसबारे धेरै अनुसन्धानहरु भएका छन् । तर, वैज्ञानीक तथ्य हालसम्म आउन सकेको छैन । केही अनुसन्धानले आवाज निकाल्नु नाटकमात्र हो भनेका छन् । केही अनुसन्धानले आनन्दको अभिव्यक्ति वा मनोरञ्जन रहेको पनि देखाएका छन् । केही अनुसन्धानले सेक्सका बेला महिला अचेत अवस्थामा पुग्ने भएकाले आवाज निकाल्नु सामान्य हुने देखाएको छ । यसबारेमा भएको पछिल्लो अनुसन्धानको नतिजाको निस्कर्ष पनि फरक खालको छैन । अमेरिकाका गेल ब्रेबर र कोलिन ए हैंडीले अनुसन्धान गरेका थिए । सो अनुसन्धानमा सेक्समा सक्रिय १८ देखि ४८ वर्षसम्मका ७१ जना महिलालाई सहभागी गराइएको थियो । उनीहरुले सहभागी महिलालाई ‘तपाई सेक्स गर्दा आवाज किन निकाल्नु हुन्छ रु’ भनी प्रश्न गरेका थिए । अधिकांश महिलाले सेक्समा आवाज निकाल्नु बहानामात्र भएको बताएका थिए । कसैले पनि यसलाई यौन अर्ग
टुँडाल : किन मन्दिरमा कुँदियो यौन आसनको आकृति ?
यौनका विषयमा कुरा गर्दा अझैपनि नेपाली समाज खुम्चन्छन् । यौनलाई ‘छाडा’ मानिन्छ । त्यही कारण धेरैजसोले यौनका विषयमा जाग्ने जिज्ञासा, यौन इच्छालाई भित्रभित्रै दबाएर बस्छन् । यौनको प्रसंग कोट्याउनसाथ रातोपिरो हुन्छन् । भनिन्छ, यौनप्रतिको गलत धारणा र बुझाईले आज दम्पतीको सयन कक्षबाट कलह पैदा भएको छ । यौन कुष्ठा र आवेगको भयावह नतिजा बलात्कार, यौन हिंसाको रुपमा प्रकट हुँदैछ । जबकि संयमित, सिर्जजनात्मक यौनका समबन्धमा हाम्रा पिता–पूर्खाले सदियौंदेखि अनेक अभ्यास गर्दै आए, जसले यौनका आयम र महत्वलाई अरु गहिराइमा बुझ्न सकियोस् । त्यही अभ्यास थियो, मन्दिरको टुँडालम कुँदिएका थरीथरीका यौन आसन । ललितपुर पाटन दरबार क्षेत्रको चार नारायण, हनुमान ढोका दरबारको विश्वनाथ, भक्तपुरको दत्तात्रय मन्दिर जस्ता मन्दिरमा जाँदा मूल मन्दिरको ढोका माथिको चारै तर्फ हेर्नुहोस् अनेकन यौन आसन देख्नुहुनेछ । विभिन्न कलाकृतिका
कारोना भाइरस वीर्यबाट सर्दैन, तर….
कोरोना भाइसरबाट जोगिन व्यक्तिगत दुरीलाई महत्वपूर्ण उपायका रुपमा लिइँदै आएको छ । यसका लागि धेरै देशहरूले लकडाउन र आइसोलेसनको तरिका अपनाउँदै आएका छन् । तर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषले विभिन्न अध्ययनहरूलाई आधार मानेर यो बताएको छ कि महिनौं लामो लकडाउनका कारण अनावश्यक गर्भधारण, बाल विवाह र महिला हिंसाका घटनाहरू बढ्न सक्छन् । युएनएफपीएको एक रिपोर्टअनुसार कम र मध्यम आय भएका देशका मानिसहरूलाई लकडाउनमा आधुनिक गर्भनिरोधक साधनहरूको पहुँचमा समस्या हुन सक्छ र यसले गर्दा अनावश्यक गर्भधारण हुन सक्छ । महिनौ‌ंको लकडाउनले महिलामा स्वास्थ्य समस्या आउने र बालविवाह अन्त्य गर्ने कार्यक्रममा ढिलाइ हुने र त्यसको परिणामस्वरूप अर्को दशकसम्म बालविवाहका घटनाहरू बढ्न सक्ने दाबी गरिएको छ । वीर्यमा कोरोना पाइएन तर… यसैबीच चीनमा गरिएको एक अध्ययनले यौनसम्पर्कबाट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नसर्ने देखाएको छ । चीनको
वैवाहिक जीवनमा दम्पतिबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनका लागि यौनले जसरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ, ठिक त्यसैगरी स्वास्थ तथा सौन्दर्यका लागि पनि यौनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ । विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्रँप्त निष्कर्ष के छ भने नियमित रुपमा राखिने यौन सम्बन्धले विभिन्न प्रकारका रोग तथा शारीरिक समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यसले खासगरी तनाव, डिप्रेसन, प्रोस्टेट सम्बन्धि समस्याका साथै मोटोपना तथा आस्टियोपोरोसिस जस्ता समस्यामा नियमित यौन सम्पर्कले सकारात्मक फाइदा पुर्‍याउने विभिन्न अध्ययनहरुले प्रमाणित गरेका छन् । यौन सम्पर्कमा शारीरिक स्पर्शको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । हुन त प्रेमी-प्रेमिका हुन् अथवा लामो समयपछि भेटिएका दम्पत्ति नै किन नहुन्, एक झलक पाउने बित्तिकै उनीहरुको शरीरमा रासायनिक प्रक्रिया प्रारम्भ भैसक्छ । त्यसपछि उनीहरुले एक-अर्कालाई गर्ने शारीरिक स्पर्शल
के यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ कोरोना संक्रमण?
२७ वैशाख : हालसम्म कोरोना भाइरस यौन सम्बन्धबाट फैलिदैन भन्ने कुरा मानिदै आइएको थियो। तर, चीनका अनुसन्धानकर्ताले पछिल्लो अनुसन्धान यसबारे नयाँ खुलासा गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, यदि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित पुरुषले कसैका साथ यौन सम्बन्ध राख्छ भने उसमा पनि कोरोनाको संक्रमण हुनसक्छ। किनकि संक्रमित केही पुरुषहरुको वीर्यमा कोरोना भाइरस पाइएको छ। चीनको शांगक्यू म्यूनिसिपल हस्पिटलमा भर्ती कोरोना भाइरसबाट संक्रमित ३८ जना पुरुषहरुको जाँचमा यो कुराको खुलासा भएको हो। यीमध्ये ६ जना बिरामीहरुको स्पर्ममा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको थियो। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित ती ६ जना पुरुषहरुमध्ये केही पहिले नै भाइरसको बिमारीबाट ठीक भइसकेका छन्, तर उनीहरुको स्पर्ममा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको हो। यद्यपी, चीनका अनुसन्धानकर्ताहरुले शारीरिक सम्बन्ध बनाउँदाको समय कोरोनाको संक्रमण हुन्छ कि हुदैन